Somalia: Boqol Caruur Ah Oo U Dhintay Saacadii U Danbeeyay Macaluul Iyo Xanuunka Cholera, Kumanaan Buuxiyay Cusbataalada Iyo Caawimooyinka Gargaarka Oo Aan Waxba Ka Bedelin Xaalada | Araweelo News Network (Archive) -
Somalia: Boqol Caruur Ah Oo U Dhintay Saacadii U Danbeeyay Macaluul Iyo Xanuunka Cholera, Kumanaan Buuxiyay Cusbataalada Iyo Caawimooyinka Gargaarka Oo Aan Waxba Ka Bedelin Xaalada
Muqdisho(ANN) Xanuunka Cholera iyo xanuuno kale ayaa ka dilaacay xeryaha qoxootiga Koonfurta Somalia oo ay ku jiraan kumanaan qoys oo caruur iyo haween u baddan, waxaana saacadihii u danbeeyay ku dhintay halkaa ku dhowaad 100 caruur iyo haween isugu jira. Kadib markii uu ka dilaacay
xeryaha Qoxootiga ku sugan Afgooye, Bay, Bakool iyo xeryo ku yaala Magaalada Muqdisho, kuwaas oo u dhintay macaluul ka taagan halkaa iyo xaalad aragagax leh oo caafimaad daro, taas oo keentay inay ka dilaacaan xauunada Cholera iyo kuwo kale oo aan weli la aqoonsan.
Muuqaalka Ilma yar oo yaala cusbitaalka oo uu haleelay Cholera
Wakaaladaha Wararka ayaa qaarkood shaaciyeen macaluusha iyo xanuunada ka dilaacay halkaa, isla markaana soo bandhigay muuqaalo naxdin baddan, iyadoo la geeyay Cusbitaalada kumanaan caruur iyo haween ah. Kadib markii macaluusha weli ka taagan halkaa ay u raaceen xanuuno halis ah sida Cholera oo laga cabsi qabo inuu usoo talaabo dhinaca badhatamaha Somalia, isla markaana saamayn ku yeesho qoxootiga ka talaabay xuduudaha.
Masiibada bini aadanimo ee ka taagan halkaa ayaa sii socota iyadoo ay mujtamaca aduunku si weyn ugu gurmadeen dadka dhibaataysan ee Soomaalida, waxaana la rumaysan yahay in aanay sahayda gargaarka ee loogu talo galay dadkaa u gaadhin sidii la rabay, taas oo keentay inay xaaladu faraha ka baxdo .
Cusbitaalada Magaalada Muqdisho ayaa isku deyaya inay u gurmadaan dadkaa. Laakiin waxa muuqata in loo baahan yahay weli sahay gargaar oo dheerad ah iyo dawooyin si loo hakiyo masiibada bini aadanimo ee ka taagan halkaa iyo macaluusha ay weli u dhimanayaan boqolaal caruur iyo haween Soomaaliyeed. Magaalooyinka Afgooye, Bay iyo Bakool ayaa ah meelaha ugu daran iyo ay Cusbitaaladu buux dhaafeen, isla markaana aanay dadku haysan dawooyin iyo cunto ku filan weli.